Buy Books at our shop Omyanmar
ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း အသုံးအနှုန်းများ A To Z
ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း အသုံးအနှုန်းများ ဗ အသ ဇ (အခွင့်အလမ်း စာအုပ် ၁၃) ]]ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွင် အားသာချက်တစ်ခုရှိပါသည်။
မောင်ရေအေး(ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်) အင်တာဗျူးနည်းဗျူဟာ (အခွင့်အလမ်း စာအုပ် ၂၂) အလုပ်အကိုင်အတွက် လူတွေ့အင်တာဗျူးသည် ၀န်ထမ်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်မည့်သူတစ်ဦး၏ ဘ၀တက်လမ်းအတွက် အရေးပါသောအခန်း ကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပါသည်။
မောင်ရေအေး (ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်) မန်နေဂျာများနှင့် ငွေရေးကြေးရေးဘဏ္ဍာရေး (အခွင့်အလမ်း စာအုပ် ၃၆) ငွေရေးကြေးရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးစာရင်းပညာကို မလေ့လာခဲ့ဖူး သောမန်နေဂျာများအတွက် လက်ကျန်ရှင်းတမ်း၊
မောင်မောင်မြင့်သိန်း (စက်မှုတက္ကသိုလ်) တစ်ဆင့်စကားမားကက်တင်း (အခွင့်အလမ်း စာအုပ် ၃၂) Andy Sernovitz ၏Word of Mouth Marketing စာအုပ်ကို မောင်မောင်မြင့်သိန်း(စက်မှုတက္ကသိုလ်)က ဘာသာပြန်ထားသည်။ မူရင်း စာရေးသူ၏ အာဘော်အတိုင်းတင်ပြထားပြီး စာတွေ့လက်တွေ့ပေါင်း စပ်ထားသောစာအုပ်ဖြစ်ကြောင်း ဘာသာပြန်ဆိုသူ၏အာဘော်လုံးဝ မပါကြောင်းဖော်ပြထားသောစာအုပ်ဖြစ်သည်။
စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာမားကက်တင်း Emotion Marketing
မောင်မောင်မြင့်သိန်း (စက်မှုတက္ကသိုလ်) စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာမားကက်တင်း (အခွင့်အလမ်း စာအုပ် ၁၉) ၂၁ ရာစုတွင် မားကက်တင်းနည်းဗျူဟာ၊ မဟာဗျူဟာများစွာ ပေါ် ထွက်လာခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက်Emotion Marketing (စိတ်ခံစားမှု ဆိုင်ရာ မားကက်တင်း) သည်လည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။Emotion Marketing ဟူသည် မဟာဗျူဟာများသို့ ဦးတည်သော အခြေခံသဘောတရားများဖြစ်သည်။
မောင်မောင်မြင့်သိန်း (စက်မှုတက္ကသိုလ်) ဘ၀အိပ်မက်များလှပစေသူ မိုဟာမက်ယူနွတ် (အခွင့်အလမ်း စာအုပ် ၁၄) ဤစာအုပ်သည် ဆင်းရဲသားများအတွက် အသေးစားငွေချေးလုပ် ငန်းအစီအစဉ် စတင်ကြံဆခဲ့သူ၊ ဂရာမင်းဘဏ်ဥက္ကဌ၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ဆင်းရဲသားများ ပံ့ပိုးမှုပြုအသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း အစီအစဉ်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသူ ပါမောက္ခဒေါက်တာ မိုဟာမက် ယူနွတ်၏...
ပြောနည်း ၁၀၀ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး အင်္ဂလိပ်စာ
ပြောနည်း ၁၀၀ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး အင်္ဂလိပ်စာ (အခွင့်အလမ်း စာအုပ် ၃၄) Andrew D.Miles ရေးသားပြုစုသော 100 ways to say it Business English စာအုပ်ကို ဆရာဇာနည် (My Way!)က ပြန်ဆို ပေးထားပြီး အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်မှဝန်ထမ်းများ လက်ကိုင်ထားသင့်သော စာအုပ်ဖြစ်သည်။
ဇာနည် (My Way!) အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနည်း လက်ရွေးစင်ဆောင်းပါးများ (အခွင့်အလမ်း စာအုပ် ၃၅) ဤစာအုပ်တွင်တင်ပြထားသော နည်းလမ်းများသည် စာဖတ်သူ အတွက် ကျိန်းသေပေါက်လိုက်နာရမည့်နည်းလမ်းများဟု မယူဆစေလို ပါ။ အမှီအခိုကင်းသည့်လေ့လာသူများအဆင့်သို့ရောက်ရှိစေရန် မျှဝေခြင်း ဖြစ်သဖြင့် ဖတ်ရှုသူ၏ ပညာအခံအလျောက် မလိုသည်ကိုပယ်၍ တချို့ တစ်ဝက်အသုံးတည့်လျှင် ၀မ်းမြောက်မည်ဟု...
ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ) နေရောင်သည်ရောဂါပိုးကိုသေစေသည်နှင့် အခြားဆောင်းပါးများ (အခွင့်အလမ်း စာအုပ် ၂၇) ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ)၏ ဘောဂဗေဒအကြောင်း၊ ဘဏ် အကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအကြောင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် စာနယ်ဇင်းအခန်းကဏ္ဍတို့အကြောင်း ဆောင်းပါးများကို စုစည်းထုတ်ဝေ ထားသောစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။
ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ) မပြောမပြီး (အခွင့်အလမ်း စာအုပ် ၂၁) ယခုစာအုပ်မှာ စာရေးသူ၏ ခရီးသွားအတွေ့အကြုံများ၊ စာပေ ဟောပြောပွဲအတွေ့အကြုံများ၊ စီးပွားရေးအတွေးအမြင်များကို စုစည်း ထုတ်ဝေထားသောစာအုပ်ဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာမောင်မောင်စိုး Marketing Insights from A to Z (အခွင့်အလမ်း စာအုပ် ၃၁) Philips Kotler ၏ စာအုပ်ကို ဒေါက်တာမောင်မောင်စိုး ဘာသာ ပြန်ရေးသားသောMarketing Insights from A to Z စာအုပ်တွင် မားကက်တင်းသမားတို့အတွက် သိသင့်သိထိုက်သောအချက်အလက် အကြောင်းအရာများကို A to Z ဖော်ပြထားသဖြင့် မားကက်တင်းသမား တို့အတွက် မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်သောစာအုပ်ဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာမောင်မောင်စိုး (ဘောဂဗေဒ) ကိုင်တွယ်ရခက်သော အင်ဖလေးရှင်း (အခွင့်အလမ်း စာအုပ် ၈) ]]ငွေဖောင်းပွမှုဟုခေါ်သော အင်ဖလေးရှင်း (ငည်ူအေငသည) ကို အချို့ စီးပွားရေးပညာရှင်များက မီးနှင့်နှိုင်းကြပါသည်။ သုံးတတ်ဖို့သာ အရေး ကြီးသည်ဟုဆိုကြပါသည်။ သုံးတတ်ဖို့ အရေးကြီးသည်ဟုဆိုရာတွင် သုံးတတ်သူဖြစ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးနေပြန်ပါသည်။ ထိုမီးကို ကိုင်တွယ်အသုံး ပြုမည့်သူ၏...
အောင်မောင်း အိမ်ဘေးက သူဌေးတွေ (အခွင့်အလမ်း စာအုပ် ၁၅) ]]ဆရာနေ၀င်းမြင့်ရဲ့ ကလောင်ခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အောင်မောင်းဆိုတဲ့ ကလောင်အမည်နဲ့ ရေးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ချမ်းသာလာတဲ့သူဌေးတွေအကြောင်းကို သရော်စာဟန်နဲ့ ခပ်သွက်သွက် လေးရေးထားပေမဲ့ စီးပွားရေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းတွေကိုလည်း သာမန်လူတွေ နားလည်လာအောင် ရှင်းလင်းစွာရေးထားတဲ့ စာအုပ်...
သူရထိုက် လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်ပါနှင့် အခြားဆောင်းပါးများ အခြားဆောင်းပါးများ (အခွင့်အလမ်း စာအုပ် ၂၄) နှလုံးသားနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်၊ စိတ်တိုတတ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်၊ မထင်မှတ်ဘဲလုပ်ဆောင်ခဲ့သောလုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေး အကြောင်းတစေ့တစောင်း၊ အလုပ်ပြောင်းလုပ်ကြသူများ၊ ပြဿနာဖြေ ရှင်းနည်းဆယ့်နှစ်ခု၊ လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်ပါ စသည့်ဆောင်းပါး ၄၃...
လူထုစိန်ဝင်း တတိယအရွယ်၏ ပထမဝေဒနာ အခြားဆောင်းပါးများ (အခွင့်အလမ်း စာအုပ် ၂၅) ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သောဆရာကြီး လူထုစိန်ဝင်း၏ လူငယ်များ အတွက် အတွေးအမြင်၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင် အကြောင်း အရာတို့အကြောင်း အခွင့်အလမ်းဂျာနယ်တွင် အပတ်စဉ်ရေးသားခဲ့သည့် ဆောင်းပါးများကို စုစည်းထုတ်ဝေထားသည့်စာအုပ်ဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီကို ကျောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး မန်နေဂျာကို ကျောခိုင်းတာ
ရဲမြင့် (စွန့်ဦးတီထွင်) ကုမ္ပဏီကို ကျောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး မန်နေဂျာကို ကျောခိုင်းတာ (အခွင့်အလမ်း စာအုပ် ၁၀)ကုမ္ပဏီအတော်များများတွင် ပြဿနာများ ဒုနဲ့ဒေးပါ။ ၀န်ထမ်း များလေလေ၊ လုပ်ငန်းကြီးမားရှုပ်ထွေးလေလေ ပြဿနာကများလေ လေပါပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း I don't leave Company, I Leave Manager}ဆိုတဲ့ စကားပေါ်လာလေသလားပဲ။ ဆိုလိုတာက မန်နေဂျာ နဲ့မတည့်လို့ ကုမ္ပဏီက ထွက်တယ်ဆိုတဲ့...
မတ်သူရိန် ဂျပန်-အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ သုံးရောင်ခြယ်စာစုများ အခြားဆောင်းပါးများ (အခွင့်အလမ်း စာအုပ် ၃၀) မြတ်သူရိန်B.Sc(Chemistry) Diploma in Japanese (YUFL) ရေးသားပြုစုသော ဂျပန်-အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ သုံးရောင်ခြယ်စာစု များစာအုပ်တွင် အီဒီယံများ(ဗန်းစကားများ)၊ စကားပုံများ၊ အရပ်သုံး စကားများ၊ အလင်္ကာများ စသည်တို့ကို ဘာသာသုံးမျိုးလုံးဖြင့် ဖော်ပြထား သဖြင့်...
ဒေါက်တာဝါ၀ါမောင် နိုင်ငံတစ်ခုအတွက် အရည်အသွေးရှိသောတိုးတက်မှုနှင့် အခြားဆောင်းပါးများ (အခွင့်အလမ်း စာအုပ် ၂၈) ၂၁ ရာစုသင်ယူနည်း (၈)မျိုး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စဉ်ဆက်မပြတ် အောင်မြင်စေဖို့၊ အာဆီယံနှင့် အီးယူတို့၏ ကွာခြားချက်၊ ဥရောပသမဂ္ဂ အကြောင်းသိကောင်းစရာ၊ွ-၂၀ ဆိုသည်မှာ၊ နိုင်ငံတစ်ခုအတွက် အရည်အသွေးရှိသောတိုးတက်မှုစသည့်ဆောင်းပါး ၂၄ ပုဒ်စုစည်းထုတ်...
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာတင်စိုး ဘာလဲဟဲ့ ဒေါက်တာဘွဲ့ (အခွင့်အလမ်း စာအုပ် ၉) ]]ဒေါက်တာဘွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံနဲ့ လေ့လာမိ သလောက်အရ နိုင်ငံအလိုက်၊ တက္ကသိုလ်အလိုက်၊ ဘာသာရပ်အလိုက် သတ်မှတ်ချက်တွေ၊ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေ မတူတာတွေရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ အစဉ်အလာတွေ၊ စနစ်တွေ၊ ဘာသာရပ်ဂိုဏ်းတွေ၊ ကွဲပြားမှုအပေါ် မူတည်ပြီး ခြားနားတာတွေလည်းရှိပါတယ်။
မင်းအောင်မင်း လုပ်ငန်းငယ်တစ်ခုကိုရှင်သန်အောင်စဉ်းစားခြင်းနှင့် အခြားဆောင်းပါးများ (အခွင့်အလမ်း စာအုပ် ၂၃) အရောင်းမပါးအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ လိုငွေပြခြင်း၏ကောင်း ကျိုး၊ ရေနံဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုနှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအခြေအနေ၊
ဦးဝင့်ကျော် အမြတ်ရရှိရေးအခွင့်အလမ်းများ (အခွင့်အလမ်း စာအုပ် ၂၀) ဤစာအုပ်ခေါင်းစဉ်ကိုမြင်လိုက်လျှင် ၀န်ထမ်းများက လစာနဲ့ အသက်မွေးနေသဖြင့် လစာရနေလျှင် အမြတ်ရှာစရာလိုပါဦးမည်လား ဟု တွေးမိကောင်းတွေးမိပါလိမ့်မည်။
၀င်းသိန်းဦး ထိတ်ထိတ်ကြဲမန်နေဂျာဖြစ်လိုသော်နှင့် အခြားဆောင်းပါးများ (အခွင့်အလမ်း စာအုပ် ၄)
မောင်စူးစမ်း ကွပ်ကဲထိန်းချုပ်မှုဝန်းကျင်ဒိုင်းနမစ်နှင့် အကောင်းဆုံးပါဖောင်းမဲန့် (အခွင့်အလမ်း စာအုပ် ၅)
ထက်ကျော် ငှက်ပျောသီးပဲပေးရင် မျောက်တွေပဲလာလိမ့်မယ့် (အခွင့်အလမ်း စာအုပ် ၆) တချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေက လူတွေကို လူလိုသဘောမထားဘဲ သူ့ရဲ့ လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့ စွမ်းအား (Ability) ကုန်ခန်းတဲ့အထိ တစ်နည်းအားဖြင့် ကြံတစ်ချောင်းကို ရှိသမျှ၊ ရသမျှ အရည်အားလုံးညှစ်ယူတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ခိုင်းတတ်ကြပါတယ်။